हिमाल खबरपत्रिका | गरौं, चर्पीका कुरा
८-१४ वैशाख २०७६ | 21-27 April 201
गरौं, चर्पीका कुरा
कर्णाली नदी किनारको राकम पुग्दा झमक्कै साँझ् पर्‍यो । सन्दर्भ थियो, तेस्रो नदी शिखर सम्मेलन । आयोजकले तोकिदिएको पालमा सामान राखेपछि व्यवस्थापकलाई सोधें, “प्राकृतिक आवश्यकता पूरा गर्ने ठाउँ कता हो ?” टाँगिएका पालदेखि केही पर लहरै प्लाष्टिकका कोठा बनाइएका थिए, शौच र स्नानस्थल । तीन दिनसम्म महिला, पुरुष, विदेशी, वर्तमान र पूर्वमन्त्रीहरू नित्यकर्मका लागि त्यता पुग्थे । प्लाष्टिकका कोठाभित्र टुक्रुक्क बस्नु पर्ने प्यान थिए ।
पाँचतारे होटलको चर्पी
सिंहदरबारभित्रको चर्पीको युरिनल ।
उनले ‘बोलाएर हाम्रो बेइज्जत गर्ने’ भन्न थाले, म पक्क परें । उपस्थित केही अगुवाले धारा र चर्पीको कुरा गर्दा त्रिविको बेइज्जती हुन्छ समेत भने । विमतको तर्क मोटामोटी यस्तो आयो, “त्रिविबाट पास भएका विद्यार्थी हार्वार्ड पुगेका छन्, चर्पीको व्यवस्थापन र प्रज्ञान जोडिएको हुँदैन ।” विश्लेषकको भनाइ प्रणालीप्रति लक्षित थियो, अगुवाहरूले प्रणाली र व्यक्ति छुट्ट्याउन नसकेको जस्तो लाग्यो ।
अनुष्ठानपछि छलफलको क्रममा मैले भनें, “म पनि कुनै बेला त्रिविमा थिएँ तर बेइज्जती भएको मानिनँ ।” थपें, “त्रिवि समस्त नेपालीको हो, त्यहाँ उम्दा, बौद्धिक विमर्श र प्रज्ञानको प्रवद्र्धन हुनुपर्छ भन्ने आशय हामीले पनि राख्न पाउनुपर्छ ।” तर बुझन र बुझाउन सकिएन । अन्त्यमा निवेदन गरें, “म सानोतिनो लेखक पनि हुँ, त्रिविका केही कार्यालयका चर्पी हेर्न आउँछु र जे देखें सोही बमोजिम लेख्नेछु ।”
भवनको शौचालयले लाजमर्दो बनायो । धत्तेरी ! पिसाबदानीमा पिसाब भरिएको थियो, निकास बन्दका कारण । त्यसपछि काठमाडौंका केही तारे होटल, ब्याङ्क, निजी कार्यालयतिर गएँ, चर्पीहरू सफा थिए । सरकारी कार्यालय र एअरपोर्टका चर्पी मात्रै किन गन्धपुरी र फोहोर ? मुलुकको नेतृत्व लिएकाहरूलाई निवेदन गर्छु, “हाम्रो देशको मुख्यालयमा यस्तो अवस्था रहनुहुँदैन । सार्वजनिक कार्यालयहरूका शौचालय सफा–सुग्घर राख्न अभियानै शुरू गरौं । फोहोर चर्पी असभ्यताको प्रतीक हो ।”